Global Voices teny Malagasy » Brezila: nigadra fa naneho hevitra tamin’ny blaogy (bolongana) · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Oktobra 2008 8:03 GMT 1	 · Mpanoratra Paula Góes Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Amerika Latina, Brezila, Fahalalahàna miteny, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Lalàna
Nametraka lahatsoratra, ka nampitsahatra ny fialana sasatra tamin’ny famahanam-bolongana, ho fiaraha-mientana amin’ny Major Roberto Cavalcante Vianna, ilay olom-pirenena Breziliana naiditra amponja voalohany noho ny fanehoan-kevitra tamin’ny bolongana ny Manamboninahitra ao amin’ny polisy Alexandre de Sousa  [pt]:
Efa mpianatry ny Major Roberto Vianna aho tany amin’ny toeram-panofanana ny manamboninahitry ny polisy. Mpampianatra momba ny Zon’olombelona izy tamin’izany fotoana izany. Olona mpandala ny rariny izy, mpanaja ny filaminam-bahoaka, fitaratra eo amin’ny mpiara-belona. Ny fandikan-dalàna nataony dia ny fitovia-keviny tamin’ny Major Wanderby izay voampanga ho tsy manara-dalàna raha nohadihadian’ny polisin’ny miaramila. Voaheloka higadra 12 andro noho ny fanehoan-kevitra tamin’ny bolongana iray! Ry Major Vianna, maneho etoana ny fanohanako anao aho amin’izao fotoana mangidy iainanao izao ! Miangavy anao hifahatra amin’ny lalana efa nizoranao. Aza kivy. Ny fikirizanao no fitaovam-piadiana mahery indrindra eo ampelatananao. Izao no kopakopa-tanana avy amin’olona mankasitraka ny ataonao sy nianatra zavatra maro avy taminao.
Ao anatin’ny tabataba tanteraka ihany koa ny mpamaham-bologana sady Mpifehy eo amin’ny polisy ihany koa, Wanderby Medeiros  [pt], izay nilaza vaovao taminay tao amin’ny lahatsorany farany  fa voaheloka higadra 12 andro ny Major Vianna tamboalohany tamin’ny 7 oktobra, saingy noafahana ny ampitso noho ny habeas corpus (rafi-pitsarana anglo-saxon nijoro tamin’ny 1679 miantoka ny fahalalahan’ny tsirairay sy miaro tsy hosambosamborim-poana ihany koa). Nohazavainy moa ny fanampim-pahadisoana nataon’i Vianna tamin’ny lahatsoratra naoakany taloha:
Naneho hevitra tsy nanafina anarana tao amin’ny bolongan’olom-pirenena iray manohitra ny politika ratsy ampiharin’[ny Goverinora] Sergio Cabral, [ny minisitry ny filaminam-bahoaka] Jose Mariano Beltrame sy ny tariny i Roberto Vianna!
Nampiasa ny zo iantohan’ny lalampanorenana i Vianna!
Na dia maro aza ny olotsotra naneho hevitra momba ity raharaha ity, dia nikaroka izay tena ambaran’ny fanehoan-kevitra nahatonga ny fisamborana ny mpanao gazety Gustavo de Almeida  [pt], mpamaham-bolongana hany tsy polisy amin’ity lahatsoratra ity, hafatra ho fitovian-kevitra amin’ny
Major Wanderby mitsikera ny fomba itondrana ny polisy ao Rio de Janeiro:
Inona moa ny ilàna ny lehiben’ny andrim-panjakana? Moa ve tsy ho soa hoan’ny daholobe no iandraiketan’ny olona mandray izany asam-boninahitra izany? Moa ve tsy ny famongorana ny kolikoly amin’ny endriny rehetra no porofon’ny fikarakarana antsika?
Stive  [pt], kosa etsy andanin’izany, nanadihady ary nahazo vaovao fa ny hamaizana any Major Wanderby amin’ny ankapobeny dia noho izy mamoaka lahatsoratra amin’ny bolongana maro , Noho ny bolongany lasa iray amin’ireo manandaza ary resahina any anivon’ny manamboninahitra any. Nolazainy ary fa mampalahelo ny toe-draharaha:
Ny Major Wanderby no iray amin’ireo manamboninahitra zokiny vitsy izay TSY mangina manoloana izao firaisana tsikombakomba tsy rariny maro izao ary asehony any amin’ny bolongany izany, ary ireny no sokajian’ny mpifehy ambony ho fanakorontanana, sady tsy mifanaraka amin’ny toerana misy azy. Tsy atao mahagaga loatra raha maro amin’ny manamboninahitra amin’ny polisy no misafidy ny tsy hampiseho ny endriny amin’ny amin’ny bolongana, iza koa moa no mangataka ho voan’ny komandy jeneraly tehamaina ka ho gadraina in-telo tahaka ny Major?
Mihevitra i Mônica  [pt] fa efa nilaozan’ny toetr’andro sady avy amin’ny vanim-potoanan’ny jadona ny fitsipika mandrara ny manamboninahitra hanambara ny heviny araka ny fahitany azy, ary dia ataony ankamantatra avy amin’izany ihany koa ny mety ho fiainan’ireo manamboninahitra lefitra:
Tranga ho ana-manamboninahitra ambony io voalaza etsy ambony io, hevero araka izany izay iainanay. Moa ve manara-dalàna ny fisamborana manamboninahitra ambony noho ny filazany ny heviny? Moa ve tsy mandika izay lazain’ny lalampanorenantsika izany? Ary dia mitsikera ny tsy ametrahantsika ny endritsika eto ny sasany!
Milaza i José Ricardo [pt] fa manohana ny fahaalaham-pitenenana izy na dia tsy afa-mampihatra izany ho an’ny tenany aza. Nidifiany ny hilaza ny heviny tamin’ny famonjana ny Major, saingy nametraka torohevitra ho an’ny mpamaky azy izy:
Noho izany, ry sakaiza, tandremo tsara izay soratanao eo amin’ny tahala fametrahan-kevitra.
Na dia tsy azony natao aza, dia nanohitra ny goverinemanta ankehitriny ireo mpiasam-panjakana ireo. Iray tamin’ireo mpanetsika ny fitakiana fanondrota-karama ho an’ny polisy ny Major Wanderby – mandray $500 isambolana manko ny polisy manamboninahitra vao nampidirina hiasa. Tsikeran’izy ireo ny hakelin’ny karama ao anivon’ny asa mampidi-doza iainan’izy ireo izay antony mahalavo ny miaramila Breziliana sy mampiroborobo ny kolikoly any amin’ny manamboninahitra. Araka ny tatitra nataon’ny vaomieran’ny Zon’olombelona eo anivon’ny Firenena Mikambana nivoaka tamin’ny 15 Septambra lasa teo , dia nisy fandraisana anjaran’ny polisy breziliana ny vono olona 1 amin’ny 5 mitranga ao Rio de Janeiro.
Na dia tsy azony atao aza ny milaza ampahibemaso hitsikera na ny polisy breziliana na ny goverinemanta dia mitombo isa hatrany ny polisy isan’ambaratongany, miafin’anarana na tsia, mampiasa ny bolongana ho fitaovam-pampahalalana sy fanetsiketsehana. Jereo eto ny lahatsoratra taloha momba izany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2008/10/16/1353/
 Alexandre de Sousa: http://www.diariodeumpm.net/2008/10/08/preso-por-comentar-em-blog/
 Wanderby Medeiros: http://wanderbymedeiros.blogspot.com/
 lahatsorany farany: http://wanderbymedeiros.blogspot.com/2008/10/acreditem-ou-no-j-est-acontecendo.html
 Gustavo de Almeida: http://gustavodealmeida.blogspot.com/2008/10/pela-primeira-vez-um-oficial-da-pm.html
 mamoaka lahatsoratra amin’ny bolongana maro: http://wanderbymedeiros.blogspot.com/2008/09/meus-primeiros-crimes.html
 José Ricardo: http://www.universopolicial.com/2008/10/caixa-de-pandora-cuidado-com-o-que-diz.html
 Araka ny tatitra nataon’ny vaomieran’ny Zon’olombelona eo anivon’ny Firenena Mikambana nivoaka tamin’ny 15 Septambra lasa teo: http://www.reuters.com/article/worldNews/idUSN1528470720080915
 lahatsoratra taloha momba izany: https://globalvoicesonline.org/2008/02/05/brazil-blogging-helps-the-police-to-mobilize-and-protest/